ဓာတ်ပုံသတင်း | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 80
U Win Tin – မတ် ၁၂ မှာ ၈၂ နှစ်ပြည့်မည်
ဟံသာဝတီဦးဝင်းတင် မတ် ၁၂ မှာ ၈၂ နှစ်ပြည့်မည် ဓာတ်ပုံသတင်း၊ မတ် ၉ ၊ ၂၀၁၂ လာမယ့် မတ် ၁၂ မှာ မြန်မာပြည်ရဲ့ အတိုက်အခံနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်၊ အင်န်အယ်ဒီပါတီ ထူထောင်ခဲ့သူ တဦး၊ သံမဏိသက်ရှည် သတင်းစာဆရာကြီး ဟံသာဝတီဦးဝင်းတင် အသက် ၈၂ ပြည့်မယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဲသည် မွေးနေ့အတွက် အမှတ်တရစကားကို ချစ်ခင်လေးစားသူများအတွက် ရေးသားထားတာကို အထက်ပါအတိ်ုင်း တွေ့ရပါတယ်။ ငယ်စဉ် အသက် ၂၈ ကတည်းက သူများအတွက် အသက်ရှင်လာခဲ့သူတဦးအနေနဲ့ သေဖို့အတွက် မနေဘူး၊ သူများအတွက် နေဖို့ အသက်ရှင်နေတယ်လို့ ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ No tags for this post. Related posts No...
ဓာတ်ပုံသတင်း မတ် ၈၊ ၂၀၁၂လူရွှင်တော်ဇာဂနာက “ကျနော် ဒီနေ့USA ကနေ မြန်မာပြည် ပြန်ပါပြီခင်ဗျာ.. ကျနော့်ညီငယ် လေဆိပ် လိုက်ပို့ ပါတယ်.. US ရောက်တုံး အစစအရာရာ ကူညီပေးခဲ့သူများအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ ..” ဟု သူ၏ Facebook တွင် ရေးသားထားသည်။ No tags for this post. Related posts No related posts.
ဇာဂနာရဲ့ Amnesty နှစ် ၅၀ပြည့် အခမ်းအနားပြက်လုံး – လွှတ်တော်က ကျပ်မပြည့်ဘူး မိုးမခဓာတ်ပုံသတင်း မတ်လ ၄ ရက် နယူးယောက်မြို့တော်မှာ ပြည်တော်မပြန်ခင် ကိုဇာဂနာက နိုင်ငံတကာလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်အဖွဲ့ကြီး (Anmesty International) နှစ် ၅၀ပြည့် အခမ်းအနားမှာ ဂုဏ်ထူးဆောင် ဧည့်သည်တော်အဖြစ် တက်ရောက်ခဲ့ရာမှာ မြန်မာပြည်ရဲ့ လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေကို ရယ်သွမ်းသွေး သွားပါတယ်။ အဲသည် ပြောဆိုချက်ကို တက်ရောက်လာကြတဲ့ ပရိသတ်က ပွဲကျတာကို တွေ့ရပါတယ်။ သူက … “ မြန်မာပြည်မှာ အကုန်ရှိတယ်။ သမ္မတ၊ အစုိုးရ၊ လွှတ်တော် ပြီးတော့ အခြေခံဥပဒေ အကုန်ရှိနေပြီ။ ပြီးတော့ လွှတ်တော်ထဲမှာ စစ်ဗိုလ်တွေက တမတ်သား ရှိတယ်။ အကယ်၍ လွှတ်တော်ထဲမှာ ကျနော့်တို့လို လူပြက်တွေကို...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေပြည်တော်တွင် မဲဆွယ် စည်းရုံး ဓာတ်ပုံသတင်း မတ် ၆၊ ၂၀၁၂ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ယမန်နေ့က နေပြည်တော်တွင် စည်းရုံး ဟောပြောခဲ့သည်။ “ကျွန်မတို့နိုင်ငံဟာ သယံဇာတတွေ အင်မတန်ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံပါ။ အရှေ့တောင်အာရှမှာ အချမ်းသာဆုံးနိုင်ငံ No tags for this post. Related posts No related posts.
ဓာတ်ပုံသတင်း မတ် ၃၊ ၂၀၁၂(ဓာတ်ပုံများ – NLD ပြန်ကြားရေးဌာန) NLD Facebook တွင် တွေ့ရသော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ မန္တလေး ခရီးစဉ် ဓာတ်ပုံ ၃၄ ပုံကို ကူးယူ ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။ No tags for this post. Related posts No related posts.
တာရာဝေယံ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၈၊ ၂၀၁၂ ဧရာဝတီမြစ်ဆုံရေကာတာ တည်ဆောက်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ဆုံအတနီးက တန်ဖဲရွာမှာ မြစ်ဆုံကျေးဇူး ပဲ့တင်သံ မိတ်ဆုံစားပွဲကို ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၄ ရက်နေ မနက် ၁၁ နာရီမှ နေ့လည် ၁ နာရီအထိ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်း ဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင်၊ ကိုကိုကြီး၊ ကိုဌေးကြွယ်၊ ကိုမြအေး၊ ကိုပြုံးချိုအပါဝအ၀င် ၁၆ ဦး၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးပညာရှင်များ ဖြစ်ကြတဲ့ ဆရာဦးအုန်း၊ ဒေါ်ဒေ၀ီသန့်ဇင်၊ တော်ဝင်နှင်းဆီ ဦးစိုးညွှန့်၊ ကာတွန်း အော်ပီကျယ်တို့နှင့်အတူ အနုပညာရှင်များ၊ NGO အဖွဲ့ဝင်များ၊ ကဗျာဆရာများ၊ ဒေသခံများ ၂၀၀ ကျော် တက်ရောက်ခဲ့တဲ့မြင်ကွင်းကို တင်ပြထားပါတယ်။ မြစ်ဆုံကိစ္စဟာ ခေတ္တရပ်နားထားတဲ့အတွက်...
တာရာဝေယံ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၈၊ ၂၀၁၂ မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းကို စည်းရုံးရေးခရီးလှည့်လည်နေတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ မြစ်ကြီးနားမြို့မနောကွင်းမှာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ဟောပြောပွဲကို ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၃ ရက် မနက် ၉ နာရီမှ ၁၀ နာရီအထိပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒေသခံ ကချင်တိုင်းရင်းသားတွေ၊ ရပ်မိရပ်ဖတွေ၊ မြို့ခံ အဲန်အယ်လ်ဒီပါတီဝင်တွေနဲ့ လူထုသောင်းချီပြီး တက်ရောက်ခဲ့ကြတဲ့ မြင်ကွင်းတွေပါ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောကြားတဲ့ ပင်လုံစိတ်ဓာတ်၊ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး၊ နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး စတဲ့ အချက်တွေကို ပြည်သူလူထုက လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ထောက်ခံကြိုဆိုကြတဲ့ မြင်ကွင်းတွေကို တွေ့နိုင်ပါတယ်။ Tags: ကချင် Related posts ရိုးပြေပြစ်အောင် – ၀ရိန်းကောင်းကြသူများ (၀တ္ထုတို) (0) နှလုံးသားတွေလှူတဲ့နေ့ (5) နှင်းဆီ …...
NLD (Saku) – အင်န်အယ်ဒီပါတီရုံး မင်းဘူး (စကု) မှာ ဖွင့်
အင်န်အယ်ဒီပါတီရုံး မင်းဘူး (စကု) မှာ ဖွင့် မိုးမခမိတ်ဆွေ (မင်းဘူး) ဖေဖော်ဝါရီ ၂၆၊ ၂၀၁၂ ယနေ့နေ့ခင်းက စကုမြို့မှာ အင်န်အယ်ဒီပါတီရုံးဖွင့်လှစ်ခဲ့ကြောင်း တွေ့ရသည်။ မင်းဘူး(စကု) NLDရုံးဖွင့်ပွဲနဲ့ ဆိုင်းဘုတ်တင်ပွဲမှာ လူငယ်ခေါင်းဆောင် ကိုနေမျိုးကျော်က နုတ်ဆက်စကားပြောရာမှာ ပြည်သူက မိမိပိုင်ဆိုင်တဲ့ မဲတစ်ပြားနဲ့ ဒီမိုကရေစီဖော်ဆောင်ရေးမှာ အဓိကဇာတ်လိုက် အဖြစ် ပါဝင်ဖို့ ပြောကြားသွားသည်။ No tags for this post. Related posts No related posts.
နမ္မတီးကျေးရွာ ဘောလုံးကွင်းတွင် ပြောကြားသည့် မိန့်ခွန်းကောက်နှုတ်ချက် Yangon Press International – http://www.facebook.com/ygnpress ဖေဖေါ်ဝါရီ ၂၃၊ မွန်းလွဲ ၃နာရီ ၄၀ မိနစ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို စောင့်ကြိုနေကြသော မြစ်ကြီးနားမြို့ ဒေသခံများ (ဓာတ်ပုံများ – REUTERS/Soe Zeya Tun – http://news.yahoo.com/) (၁) အနှစ်၂၀ကျော်အတွင်း ပြည်သူတွေချီတက်ချင်တဲ့ ဒီမိုကရေစီလမ်းမှာရှိနေတဲ့ အတားအဆီးတွေကို တဆင့်ပြီးတဆင့်ဖယ်ရှားဖို့ ကြိုးစားခဲ့ရတာပါ။ Tags: ကချင် Related posts ရိုးပြေပြစ်အောင် – ၀ရိန်းကောင်းကြသူများ (၀တ္ထုတို) (0) နှလုံးသားတွေလှူတဲ့နေ့ (5) နှင်းဆီ … ရတု (0) နိုင်ငံတော် ပြည်အရေးနှင့် ဘကြီးမိုး (0) နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးဦးသိန်းစိန်နှင့်...
မိုးကောင်းမြို့မိန့်ခွန်းကောက်နှုတ်ချက် (၂) Yangon Press International – http://www.facebook.com/ygnpress ဖေဖေါ်ဝါရီ ၂၃ ၊ ညနေ ၅နာရီ ၅၅ မိနစ် ကချင်ပြည်နယ် မိုးကောင်းမြို့နယ်ရောက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (ဓာတ်ပုံများ – REUTERS/Soe Zeya Tun – http://news.yahoo.com/) ကျွန်မတို့ပြည်သူပြည်သားတွေတိုးတက်ဖို့ဆိုတာ လုပ်စရာတွေအများကြီးပါပဲ။ ကျွန်မက လွယ်လွယ်နဲ့ အဆင်ပြေသွားမယ်လို့ ကတိမပေးပါဘူး။ Tags: ကချင် Related posts ရိုးပြေပြစ်အောင် – ၀ရိန်းကောင်းကြသူများ (၀တ္ထုတို) (0) နှလုံးသားတွေလှူတဲ့နေ့ (5) နှင်းဆီ … ရတု (0) နိုင်ငံတော် ပြည်အရေးနှင့် ဘကြီးမိုး (0) နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးဦးသိန်းစိန်နှင့် CNA ရုပ်သံတွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း (CNA) (1)